Category Archives: Myanmar မြန်မာ | Page 2
မညီညာသော မြေပြင်တစ်ခုမှ တောင်တန်းတစ်ခွင်ဆီသို့
နိဒါန်း ၂၀၁၁- ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မဟာချူလားလွန်းကွန်းတက္ကသိုလ်မှ တာဝန်ယူ ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးညီလာခံပွဲ Conference တွင် မိမိမှ ပါဠိစာတမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ရေးသားတင်သွင်းပေးပို့ပါရန် ဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ(Oxford)က တိုက်တွန်း လာပါသည်။ အချိန်သည် အောက်တိုဘာလ ကုန်ခါနီးလောက်မှာဖြစ်၏။ မိမိလည်းတတ်စွမ်းသမျှ ရှာဖွေစုစည်းပြီး နမော တဿ အာစရဏံ နမောတဿ ကိုလေ့လာခြင်းဟူသော အမည်ခေါင်းစဉ်ကို ပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးပြီး ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ပေးပို့ထားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်းသည် ခေတ္တခဏလောက် ကိုယ်စိတ်ပေါ့ပါးစွာ ဖြစ်ရခြင်းသည် ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သလို မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်း နိပ္ဖန္နော သောဘဏော အတ္ထော လုပ်ငန်းဆိုတာ ပြီးစီးအောင်မြင်မှ တင့်တယ်တယ်ဟု မိန့်တော်မူထားသည် မဟုတ်လော။ သို့ပေမယ့် မိမိသည် စာသင်သားတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ စာပေလေ့လာသင်ယူနေကြ သည့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတိုင်း […]
ဘယ်အရာမဆို အလကား သုံးတဲ့လူဟာ အလကားလူ၊ တန်ဖိုးထားပြီး သုံးတဲ့သူဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ မိမိကြည်ညိုအားထား လေးစားရသော ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး၏ အဆုံးအမစကားဖြစ်သည်။ မိမိသည် ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိသည်။ -ရခဲလှသောလူ့ဘ၀ (မနုဿတ္တဘာဝဒုလလလ္လဘ)= တန်ဖိုးရှိသောဘ၀။ -ကုသိုလ်မျိုးစုံ ပြုခွင့်ကြုံသည့်လူ့ဘုံ -တန်ဖိုးရှိသောနေရာ၊ -ကြုံခဲလှသည့်သာသနာ (ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒန၀ခဏ)=တန်ဖိုးရှိသောအချိန်၊ မိမ်ိတွေ့ကြုံနေရသော ဘဝ ဌာန ကာလတို့သည် တန်ဖိုးရှိသော အရာများဖြစ်ကြ၏၊ လိုအပ်သည်မှာ တန်ဖိုးရှိမှန်း သိဖို့ဖြစ်၏ တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုး ရှိ၏။ မိမိသည် သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ကမ္ဘာအေး၊ ရန်ကုန်တွင် အချိန်ပိုင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်း ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေ၌ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည်ကာ အထိုက်အလျောက် တရားဟောနေသည်။ ယခုတလော တရားဟောကြားရာဝယ် အာတွေ့နေသည့် တရားတစ်ပုဒ်ကား တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ တရား ဖြစ်ပါသည်။ […]
စာသိကို ကိုယ်သိဖြစ်အောင် လက်တွေ့ကျကျပေါင်းစပ်နိုင်သူ
နေ့တစ်နေ့၏ ညနေ ၅-နာရီအချိန်ခန့်ဖြစ်၏။ ၁၃၇၂-၇၃-ခု၊ပညာသင်နှစ်၏ နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချိန် နီးနေပြီးဖြစ်သဖြင့် သင်နည်းမှတ်ချက်များ ရေးသားနေစဉ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ကျောင်းတက်နေသော အရှင်ပညာဇောတ ရောက်လာပြီး ဆရာတော်ဦးသုခမိန္ဒ၏ နှစ်ငါးဆယ်ပြည်. ရွှေရတုမွေးနေ့ စာစောင်အတွက် စာမူတောင်းခံပေးပါဟု ဆို၏၊ စာရေးသူအားလည်း စာမူတစ်စောင်ရေးပေးပါဟု တောင်းဆို၏။ စာရေးသူက မိမိရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားပူဇော်မည်ဟု ဆိုသောအခါ ရှမ်းဘာသာဖြင့် ရေးသားပူဇော်မည့်သူ များနေ၍ မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားပူဇော်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပြန်၏။ ဆရာတော်ဦးသုခမိန္ဒ ဆိုသူကား တစ်ခြားမဟုတ်၊ စာရေးသူအပေါ်၌ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသော လေးစားရသော မိတ်ဆွေသီတင်းသုံးဖော် ဖြစ်သကဲ့သို့ ရန်ကုန်မြို့ သာသနာ့တက္ကသိုလ်၌ အတူနေ ပညာသင်ဖက်လည်း ဖြစ်ခဲ့၏။ ဆရာတော်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးခဲ့ရသကဲ့သို့ မိမိအတွက်လည်း ဆရာတော်က များစွာ ကူညီစောင့်ရှောက်ခဲ့ဖူး၏။ ဆရာတော်နှင့်ခွဲခွာခဲ့သည်မှာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဆရာတော်နှင့် […]
ဟေမန္တရာသီ၏ တစ်ခုသော ညနေခင်းအချိန် သာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၏ ကချင်အဆောင်မှုးဆရာတော် အရှင်ဇာနေယျသည် စာမူတောင်းခံလွှာ စာအိတ်တစ်အိတ်နှင့် စာရေးသူထံရောက်ရှိလာ၏ ရောက်မဆိုက်ပင် သူက ဦးနရိန်ဘုရား အရှင်ဘုရားရဲ့မိတ်ဆွေရင်းကြီး အရှင်သုခမိန္ဒ(တန့်ယန်း) သူ့နယ်မြေ သူ့ဒေသ လွိုင်တိန်ခမ်းမှာ သာသနာပြုနေတာ အတော်အောင်မြင်နေတယ်ဘုရား အရှင်ဘုရားလည်းကြားသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ အခုသူရဲ့သက်တော် (၅၀)ပြည့်မှာ ရွှေရတုဝိဇာတအထိမ်းအမှတ်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပမှာမို့ အဲ့ဒီပွဲအမီ သူရဲ့သာသနာပြုမှတ်တမ်းစာစောင်ထုတ်မှာ အရှင်ဘုရားအနေနဲ့သူ့အပေါ် ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ရေးသားချီးမြှင့်ပေးစေလိုပါတယ်ဘုရား ဟုဝမ်းသာအားရစာမူတောင်းခံလာသည်။ အရှင်ဇာနေယျထံမှ ဤကဲ့သို့ဝမ်းသာစကား ကြားလိုက်ရသောအခါ မွေးနေ့ရှင် အရှင်သုခမိန္ဒ စာရေးသူတို့နှင့် သာသနာ့တက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်စဉ်ကာလသူ၏ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု သိမ်မွေ့မှုများ အနေအထိုင်ရိုးသား၍ စာပေကြိုးစားခဲ့ပုံများ တိုင်းရင်းသားရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်လင့်ကစား အများနှင့် နေထိုင်ရာတွင် ဂါရဝ နိဝါတ ခန္တီတရားထားတတ်ပုံများ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အလေးပေးဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပုံများ မဟာဓမ္မာစရိယ M.A ဘွဲ့ရပြီးနောက် […]
မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ တက္ကသိုလ်သျှင်သီရိ (ဓမ္မာစရိယ၊ B.A) ———————————————- ပုလဲရောင်ဖြူ ဆဒ္ဒန်ဖြူလည်း၊ မြိုင်ငူတောစွယ်၊ သန္ဓေတွယ်၍၊ လူဝယ်လူဆန်း၊ လူထိပ်ပန်းက၊ မြိုင်နန်းရှိရာ၊ တောမှ လာ၏။ ဤလောက လူသားတို့ လေးစားမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားအပ်သော ဆဒ္ဒန်ဆင်ဖြူသည်တောအရပ်မှ ပေါ်ပေါက်၍ မင်း ဧကရာဇ်တို့၏ အသုံးအဆောင်ခံ မြင့်မြတ်သော အထူးပူဇော်ခံရသော ဆင်မင်းအဖြစ်သို့ ရောက်လာရသကဲ့သို့ ဤလောက ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးသည် မည်သည့်ရောတွင်မှ ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ် သူ၏အရည်အသွေးနှင့်သူ ရှိကြစမြဲဖြစ်ပါသည်။ တောမှာပဲ ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်ပေါ် တောင်မှာပဲ ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ် အရည်အသွေး အရည်အချင်း ရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှ တော်ဝင်နေရာသို့ရောက်ပြီး အသုံးဝင် ထင်ရှားကျော်ကြားကာ လူအများ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုး ပူဇော်မှုကိုခံရသည်မှာ ဓမ္မတာ ဖြစ်ပါသည်။ လောက သဘာဝ […]
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ အချင်းချင်း မျှဝေခံစားနိုင်မှုသည် မလွယ်ကူ။ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၊ မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သဟဇာတ မျှတဖို့သည် ခက်ခဲပါလှ၏ ။ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်း ခက်ခဲလှသည်တွင် အားလုံးချာလည်လှည့်ကာ အပြန်အလှန် နားလည်နိူင်စွမ်း အပေးအယူ မျှတနိုင်စွမ်းသည် ပို၍ခက်ခဲလှသည်။ ထိုသို့ ခက်ခဲသောအမှုကို ပြုနိုင်စွမ်းသောမိသားစုတစ်စုကို ရှားရှားပါးပါး တွေ့လိုက်ရသည်။ တန့်ယန်းမြို့မှ သပ္ပါယဂေဟာ မိသားစုဖြစ်သည်။ ထိုသပ္ပါယဂေဟာတွင် ဖခင် ဦးလှရွှေ + မိခင် ဒေါ်ညွန့်၊ သမီးကြီး မနန်းကြည်ကြည်သိန်းနှင့် သားငယ် စိုင်းသိန်းလွင် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ကြ၍ သင်္ကန်းပရိက္ခရာ နိဗ္ဗာန်ကုန်သည်ဖြစ်သည်။ အ ရောင်းအ၀ယ်ကလည်း သင့်တင့်၊ လုပ်ငန်းသဘောကလည်း အေးချမ်း၊ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲကြသော မိသားစုလည်းဖြစ်သော ကြောင့် ပူပင်သောက ကြောင့်ကြစရာ […]
1372 – ခုနှစ် တန်ခူးလပြည့်ကျော် (၈) ရက်၊ 26. 4. 2011 ၊ အင်္ဂါနေ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ မူဆယ်မြို့၊ လွယ်တိန်ခမ်းကျောင်းတိုက်းကြီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယ M.A (Buddhism) ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက တောင်တန်းသာသနာပြု ဘဒ္ဒန္တသုခမိန္ဒ၏ ရွှေရတုမွေးနေ့ ပူဇာသဘင် အခမ်းအနားတွင် နိူင်ငံတော်စာပေ (18) ဆုရှင် မြေလယ်မင်းလွင် ရေးဖွဲ့သီကုံးသည့် ရတုလီလီဆောင်စွမ်းစေ အမည်ရှိ ထပ်ကွန့်ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ် * တောင်တန်းသာသနာ ပြုရာအတွက် တုကာဖက် မမီနိုင်စရာ လူ့ရွာအတွက် အရှည်ခိုင်မာအောင် ကြည်လှိုင်သဒ္ဓါ မေတ္တာပွား ဆောင်စွမ်းအကျယ်ချဲ့ မှောင်ခန်းဖယ်ခဲ့ တောင်တန်းနယ်လှဲ့ (လှည့်) , ပြုသာသနာသည် လူ့ကမ္ဘာမှာ လင်းလက်စေတကား ။ […]
ဘဒ္ဒန္တဇောတိက (မန်းနဲ့ဇော) ဒု-ပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြား) သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်။ လူသားများသည် ကာမဘုံမှာ မွေးဖွားလာကြသူများ ဖြစ်သည်။ လိုလားမှုအဖြစ်များသည့် နေရာဌာနကို ကာမဘုံဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ယင်းဘုံ၌ နေထိုင်ကြသူများသည် ကာမဘုံသားများ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ လိုလားမှုများလည်း အတိုင်းအ ဆမဲ့ ဖြစ်နေကြသည်။ လိုလားမှုဖြစ်လာတော့ လိုအပ်ချက်တို့ကို တွေ့ မြင်လာကြ၏။ တွေ့မြင်လာရသည့် လိုအပ်ချက်တို့ကို ပြည့်မီအောင် ဖြည့်ဆည်းနိူင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုးတို့မှာ ဦးတည်ချက်များအဖြစ် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ထားရှိလာကြသည်။ ယင်းဦးတည်ချက်ကိုပင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ပန်းတိုင်တစ်ခုစီ စိုက်ထူလျက်သား ဖြစ်သွားကြ၏။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင်လျှောက်လှမ်းရာ၌ ပန်းခင်းသောလမ်းပေါ်တွင်သာ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ လျှောက်လှမ်းရသည် မဟုတ်ပါ။ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း လျှောက်လှမ်းနေကြရသည်။ ချမှတ် ထားသည့် […]
ထန်းလျက်ထုတ်လေးများ နောက်ကွယ်မှာ . . .
ညီတော် သုခမိန်ရေ . . . ညီတော့်မွေးနေ့ကို သွားဖို့ စီစဉ်ထားတာပဲရှိတယ်. . . အဲဒီလို စီစဉ်နေတုံး. . . မတ်လ ၂၄ ရက် ၈း၂၅ နာရီ ကျောင်းက ကိုရင်တွေကို စာချအပြီး ဒကာ/ဒကာမတွေနဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာ . . ကျောင်းကို ခါသွားလောက်အောင် ကြီးမားတဲ့ ငလျှင်ကြီးတစ်ခု လှုပ်သွားတယ်။ တပည့်တော်ကျောင်းကို ခါနေတာပဲ . . .။ ကိုရင်တွေက . . . ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ပန်းအိုးကြီးတွေကို လှဲမကျအောင် ဖတ်ထားကြတယ် . . .။ ဒါနဲ့ ကျောင်းမှာ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်နဲ့ တစ်ညလုံး ညံနေတော့တာပဲ . . […]